6 Talooyin Thrifty Marka Tareenka Socdaalka In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 6 Talooyin Thrifty Marka Tareenka Socdaalka In Europe
6 Talooyin Thrifty Marka Tareenka Socdaalka In Europe
(Last Updated On: 24/01/2020)
Beri baa ah, marka miisaaniyadda ma door doorashada dalal (ama ugu yaraan, ma aha sida weyn u door!) wax ahaayeen fudud; maalmahan, haddii aan rabno in aan u safro, waxaan ku khasbannahay in ay noqon smart habka aan qaban our miisaaniyadda. Inkasta oo tareen ku safraya Europe waa ikhtiyaarka ugu miisaaniyad-saaxiibtinimo ee qof kasta oo doonayo in ay la kulmaan ugu farxada badan (iyo nasashada!) habka ay u safraan, weli waxaa sii jiri kara xaaladaha jeebka-dhibaato aad rabto in aad wadid cad ee.
Sidaas, inuu kaa caawiyo inaad ugu baxay safarka aad u hesho, waanu soo wada saaray liiska waxa aan dareemayaa waa lacag top badbaadiya talooyin safarka tareenka ee Europe.
Ha ku Socda at Fiinta Holiday Times
Haa, this ka mid ah waa in ay tagaan iyaga oo aan leh, laakiin waxaa jira waxyeello ma gaadhin in aad mar kale xusuusin waxaa ka mid ah. Marka ay timaado in tababar ku safraya Europe, fasaxyada aad rabto in aad wadid cad ee waa horrayn Christmas, Sanad cusub, iyo Easter iyo sidoo kale bisha August. Waayo, sabab, ah kawadaan Koofurta inta lagu jiro bilood kuwanu, sidaas ... shaqeeyaan hareerahooda waxoogaa yar.
Ku dheji Bariga Yurub markaad Tareen ku safrayso Yurub
Inkasta oo kula taliyay in aan aad u sahamiyaan qeybo ka mid ah Europe aad rabto inaad aragto waa nooc ka mid ah aan caddaalad ahayn oo ka fog-soo kaxeeyey, waxaan u qabanaynaa si aad u faa'iido. Tareenka ku safraya Europe, waxaad ka heli doontaa wax kasta oo ku saabsan dhamaadka galbeedka waa hab ka qaalisan block bari. Sidaas, ilaa jeebka adkaanayo, madaxa bariga iyo sahamiyaan quruxda dhinacan of Europe!
FIIRO GAAR AH: Marka Bariga Yurub, xaqiiji inaad joojiso by Prague (Czech Republic), Budapest (Hungary), Belgrade (Serbia), Bucharest (Romania), Zagreb iyo Split (Croatia), Sarajevo (Bosnia iyo Herzegovina) iyo Moscow (Russia).
Iska ilaali Class 1-dii Marka Tareenka Socdaalka ee Europe
Well, sida iska cad! weli, ma noqon mid ka mid ah dadka safarka ah kuwa "filaan ah" fadhiisan fasalka 1aad. maxaad? Maxaa yeelay, waxaad kor u dhammaan doonto bixinta ganaax aad u qaali ah haddii aad qabtay oo dheeraad ah oo aad ku kici doona badan tigidhka fasalka 1aad laftiisa!
Book xalay oo tababartay haddii tareenka Socdaalka ee Europe u dhexeeya dalalka
tareenada habeen, aka tareenada habeenkii waa ikhtiyaarka ugu kharash-ool ah u safraya Yurub. Ma aha oo kaliya oo aad samayn badbaadin on qiimaha sariirta laakiin waxa kale oo aad u hesho in ay ka aragti cusub la kulmaan Europe.
Boorso cuno a
Well, aan macno geeduhu laakiin a "qabtay shixnad" oo cunto guriga, sidaa darteed uma baahnid in aad cunto u soo iibsadaan qaali on board. Waxaad badbaadin doonaa nasiib haddii aad oolin ilaa on dhaqmo at dukaanada waaweyn!
Iska ilaali Tigidhada Iibsiga Advanced on Safarada gaaban gudahood dhulweynaha Yurub
Marka uu tareenku ku safraya Europe, filan safar gaaban in ay pricier ka badan kuwa dheer; weli, waxaa jira faa'iido u ah oo aan lahayn inuu kitaabka ka hor kaas oo aanu ku dar si dabacsanaan ah ee safarkaaga iyo thriftiness waxaa ka mid ah. Marka aad ku safraya dhulweynaha Europe aad ka iibsan kartaa tigidh saldhigga ka hor loo hoydo tareenka.
Save-A-tareenka waa habka ugu fiican inay jartaan dalal fantastic qiimo aad u jaban oo wuxuu ku raaxaysan aad tareen ku safraya Europe la goosin ka mid ah maskaxda ku.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-train-traveling-europe%2F%0A%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad leedahay website a, aad ku xidhan karto our RSS Feed.
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / ru si / de ama / iyo luuqado badan.
europeantravel europetravel talooyin tareen safarka traveltips